Nidaamka makhaayadda POS | Barta makhaayadda Waiterio
Nidaamka makhaayadda POSWebsaydh makhaayad wax dhisablogWarqadahaQiimo u goyntadownloadsloginIsku day hadda
Nidaamka makhaayadda POSWebsaydh makhaayad wax dhisa
blogWarqadahaQiimo u goyntadownloadsloginIsku day hadda
Kaga sii kordhiso maqaayaddaada ku qanac
Waiterio wuxuu fududeynayaa maaraynta amarada maqaayadaha iyo baararka
Isku day hadda
Ku maaree amarrada makhaayadda 4 tillaabo fudud
Waiterio waxay isu keentaa shaqaalaha maqaayada xiriir isgaarsiineed oo siman
Sugyuhu wuxuu galayaa amarka macaamiisha barnaamijka Waiterio (oo laga heli karo aalad kasta).
Cunnadu waxay diyaarisaa amarka ka soo saartaa daabacaha kuleylka ama muraayadda jikada.
Cunnadu waxay calaamadisaa amarku sidii diyaar oo waardiyaha ayaa u keenaya miiska macaamiisha.
Lacag-hayuhu wuxuu daabacaa risiidka wuxuuna ku aqbalaa lacag-bixin kaash ama kaar ah.
Waad ka noqon kartaa oo aad ka noqon kartaa dib uga celin kartaa rukumadaada mar alla markii aad toos uga rabto barnaamijka. Xogtaada oo dhan way sii ahaaneysaa amaan.
Hubi daqliga oo soo hel saxannada u wanaagsan iyo kuwa ay tahay in laga saaro liiska.
Ku casuun asxaabtaada inay isticmaalaan Waiterio sidaa darteed amarada iyo menu-ga si otomaatig ah ayey u wadaagaan.
Waiterio waxay taageertaa dhammaan daabacaadaha kuleylka. Inta badan tartamayaashu waxay taageeraan kaliya hal ama laba nooc oo kugu khasbaya inaad iibsato qalab qaali ah.
Waiterio waxay ka caawisaa helitaanka lacag-bixinno kala duwan macaamiisha adoo adeegsanaya habab kala duwan oo lacag-bixin ah.
Waxaad ku isticmaali kartaa kiniin, casriga, telefishanka, laptop iyo kumbuyuutar desktop. Waiterio wuxuu ka shaqeeyaa dhammaan nidaamyada hawlgalka sida Android, iOS, Windows, macOS iyo Linux.
Soo dejisashada 174131
Macaamiisha faraxsan 305
Akoonada firfircoon 4125
Isku day nidaamkan maamul ee amakaaga leh ee bilaashka ah. Waxaad ku dari kartaa ilaa 100 dalab bishiiba inta aad bilaash ugu adeegsaneyso barnaamijkan. App-ka waxaa laga heli karaa Android, iOS, Windows, macOS iyo Linux. Waxaad ku adeegsan kartaa Nidaamka Bartahan iibka ah kiniin kasta, taleefanka casriga ah, tv-ga, laptop iyo kumbuyuutar desktop.
Waa dhakhso badan oo toos ah in la rakibo oo lagu dejiyo Waiterio POS makhaayadaada. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u bilowdo waa cinwaan email ah iyo aalad leh xiriir internet.
Ay jecel yihiin macaamiisheena
App Tani waxay ka caawisay makhaayaddayda yar inay si hufan oo habsami leh u ordaan.
Waiterio ayaa hagaajiyay hannaanka dalabka makhaayadayda. Qiimaha weyn ee lacagta.
Aad bay u fududahay in la habeeyo oo aad u jawaabto. Xitaa karintayaasha maqaayaddayda way jecel yihiin.
Isku day barnaamijka si bilaash ah. Waxaad ku dari kartaa ilaa 100 dalab bishiiba inta aad isticmaaleyso barnaamijka bilaashka ah. Waad iska qori kartaa mid kasta oo ka mid ah qorshayaasha soo socda si aad u qaadatid amarro badan:
100 amarada Per Month
dheeraad ah Small$19Per Month
300 amarada Per Month
600 amarada Per Month
1000 amarada Per Month
1500 amarada Per Month
dheeraad ah Large$159Per Month
∞ amarada Per Month
Akhri su'aasha inteeda kale
QaadoQaanuunka Arrimaha Khaaska ahShuruudaha &